Sajhasabal.com | Homeमहिनावारीको सरसफाईमा महिलाहरु खुल्ला बोल्न थाले
खानेपानी ,सरसफाई तथा स्वास्थ्य ( वास ) कार्यक्रम लागू भएको विहादी गाउँ पालिका वडा नं. ३ रानीपानीमा महिनावारी बेलाको सरसफाई बारेमा महिलाहरु खुलस्त बोल्न थालेका छन । एउटा केटी मान्छे बढ्दो उमेर सँगै महिनावारी हुन्छिन । यो प्राकृतिक नियमको कुरा हो । तर पहिले पहिले शुरुको महिनावारी हुँदाको बेलामा महिलाहरु धेरै दिन लुक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
त्यो समयमा प्रयोग गरिने कपडा पुराना तथा फोहोर हुन्थे । प्रयोग गरिसकेका कपडाहरु गोठको कुनामा , घरको कर्सामा अब्यबस्थित रुपमा थन्काउने काम गरिन्थ्यो । यो विशेष अबस्थामा अध्यारोमा फोहोर ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । सेनेटरी प्याड को रुपमा पुराना फोहोर कपडाहरु प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यो बेलामा फोहोर पानी , कूलोको पानीले सफा गर्ने गरिन्थ्यो । लगाएका लुगाहरु विस्तारा समेत अरुले नदेख्ने गरी धुने तथा बारीको छेउतिर सुकाउने गरिन्थ्यो । छात्राहरु महिनावारी भएको बेलामा बिधालय , कलेज समेत जादैनन् । यो बेला विशेष गरी महिलाहरु गह्रौ कठिन काम गर्नुपर्ने अबस्था थियो । यहि बेलामा कठिन काम गर्ने तर आबश्यक सन्तुलित खानेकुरा खान नहुने एबं खानै नपाउने खानमा बन्देज लगाृउने समेत गरिन्थ्यो । त्यो बेला गोठमा , अलग्गै कुनामा सुत्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
फलस्वरुप युरिनेरी ट्रेज इन्फेक्सन (यूटिआइ)यौनजन्य संक्रमणहरु बाट वढी नै प्रभावित हुने गर्दथे । ठूलो ओहोदामा रहेका पुरुषहरुका आमा , श्रीमतीहरु समेत पाठेघर आड. खस्ने समस्याबाट ग्रसित रहेको तथ्याँक बाहिर सानै आएतापनि भित्र भित्रै लामो तथ्याँक रहेको छ । यी र यस्ता समस्याहरु म्हिलाहरुबाटै लुकाईन्छ । हाम्रो सामाजिक , साँस्कृतिक चलनहरुका कारण समेत महिलाहरु आफ्ना भित्री समस्याहरु दबाएरै राख्ने सहने गरेको पाईन्छ । बास्तवमा महिनावारी भएको महिलालाई छुनु हुदैन , नछुने भएकी आईमाई भन्ने चलन ब्याप्त नै थियो ।
विगतको अबस्थालाई नियाल्दा माथी उल्लेखित ब्यबहारहरु सबै अहिले हटेका छन भनेर भन्न त सकिदैन । आजकल महिलाहरु विभिन्न विषयका भेला , बैठक , तालिमहरुमा सहभागी भई जीवन उपयोगी सवालहरुमा छलफलमा सकृय सहभागी भइरहेका छन् । त्यसो त विभिन्न खानेपानी , सरसफाई तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भला ,बैठक , तालिमहरुमा हुने थुप्रै विषयसँगै ब्यक्तिगत सरसफाई सम्बन्धी सरसफाई सूचक भित्र महत्वपूर्ण रुपमा रहेको महिनावारी बेलाको सरसफाई तथा लैंगिक समानता बारेमा खुल्ला छलफल मै महिलाहरुले आफ्नो विचार राख्न थालेका छन् ।
महिनावारीका बेलामा प्रयोग गरिने कपडा, विस्तार गुन्द्री सेनटरी प्याड सफा हुनुपर्दछ । महिलाका हरेक काममा पुरुष बाधक होईन साधक पो बन्नु पर्छ – साविक रानीपानी ५ की चन्द्रकला शर्मा बताउनु हन्छ । त्यस्तै महिनावारी भएको बेलामा घर भित्रको काम गर्न अलि दकस लाग्ने , मन नखल्ने , मनले छोएर काम गर्न नमान्ने हुन्थ्यो । अहिले सबै बुझेपछि सरसफाईमा विशेष ख्याल गरेमा केहि नहुने कुरामा रानीपानी ८ की माया देबी भटराई ढक्क छिन। महिनावारी भएकी महिलाले छुदैमा कुनै बोट विरुवा मर्ने हुदैन तथा फल नलाग्ने , झर्ने पनि हुदैन । यो समय त बिशेष प्राकृतिक अबस्था पो हो ।
यति बेला सरसफाई मा विशेष ध्यान पो दिनु पर्दछ । छुदैमा घरमा बस्दैमा पहिरो जाने भत्किने हुदैन । आयु छोटो हुने पनि होईन – कुशुम क्षेत्री थप्छिन् । यो समय गह्रौ भारी बोक्ने , लामो समय कठिन काम गर्ने तथा विशेष अबस्थाहरुमा साबधानी अप्नाउनु पर्दछ – रानीपानी ४ की शान्ता शर्मा ले बताईन् । यो बेला दूध खान नहुने , फलफूल खान नहुने भन्ने हुदैन झन् यो समयमा त सन्तुलित आहारा पो खानु पर्छ । यहि बेला शरीरलाई बढी पौष्टिक तत्व भएको खाना पो चाहिन्छ – रानीपानी १ की लक्ष्मी न्यौपानेले दर्शाइन । त्यसो त छलफलमै रानीपानी वार्डबाट निर्वाचित वार्ड सदस्य विष्णु पौडेल भन्छिन् यो बेला कडा काम नगरी आराम गर्नुृपर्छ । किनकी यो बेला महिलाको शरीर कोमल हुने हुँदा कान्छो सुत्केरोको रुपमा विशेष सुरक्षा गर्नुपर्दछ ।
हिन्दु धर्ममा महिला रुपी देबी , सरस्वती , महाकाली ,दुर्गा , भगबतीलाई जति बेला पनि पूजा गर्ने तर महिनावारी हुँदा महिला नछुने भन्ने हुदैन – रानीपानी ३ की सीता देवी शर्माले मुख खोलिन् । आजकलका युबतीहरु सेनटरी प्याड खुल्ला रुपमा दोकानबाट किनेर प्रयोग गर्न थालेका छन । कति विधालयहरुमा त छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड दिन थालिएको छ । अन्य बयस्क महिलाहरुले तथा हामीले समेत यो बेला कटन , सुतीको नरम कपडा प्याडको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छौ –रानीपानी कै सामाजिक परिचालिका रेश्मा पराजुलीले बताईन ।
आजको विश्वमा महिलामा हुनैपर्ने प्राकृतिक नियम महिनावारी लाई समाज पिच्छे अलग अलग धारणा राखेतापनि विभेदकारी हेराई हुनु विज्ञान सम्मत छैन । घरमा , टोलमा , समाजमा छोरा छोरी , महिला पूरुष नै हुन्छन् । अब महिला मात्रै होईन सामाजिक कुरुतिहरुलाई हटाई सबै रमाउने समाज बनाउने अभियानमा महिलाका सवालमा पुरुष पनि बोल्नुपर्ने जरुरी छ । समाजमा महिला पुरुष मध्ये कुनैको उपस्थिति नहुँदा साह्रै नै खल्लो हून्छ । त्यसैले समाज रुपी रथको सही यात्रा गर्नका लागि महिला पूरुष दुबैले महिनावारी सम्बन्धी शिक्षा बाट सूसूचित हुनुपर्दछ । फूलको आँखाबाट हेर्ने नजरिया बनाउन सक्नुपर्दछ । परिबर्तको थालनी आ –आफ्नो घरबाट शुरु गरौ । अनि सकारात्मक , रचनात्मक समाजको पक्षमा प्रतिबद्ध बनौ । अनि घर , टोल , छिमेक , समाज हुदै परिबर्तको यात्रा गतिशिल रुपमा अगाडी बढिरहन्छ । तव मात्रै दोस्रो पुस्ता थप प्रगतिशिल प्रगतिमा लम्कन पाउनेछ । यो पुस्ता धन्यबादी हुनेछ ।